राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेशसँगै समाजवादी र राजपामा हलचल - Jhilko
राजनीतिक दल विभाजनको अध्यादेशसँगै समाजवादी र राजपामा हलचल
जनकपुर, ९ वैशाख । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भित्र ठूलै हलचल ल्याएको छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर लागू भए लगत्तै समाजवादी पार्टीभित्र हडकम्प मच्चिएको छ भने राजपाका नेताहरुका कतिपय नेताहरु पनि भित्रभित्रै पार्टी फुटाउने योजनामा लगिसकेका छन् ।
केही बर्षअघि माओवादी पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै उपेन्द्र यादवसँग मिलेर डा. बाबुराम भट्टाराईले समाजवादी पार्टी बनाएका थिए । त्यही पार्टी यतिबेला पुनः बिभाजनको दोषाधमा पुगेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी विभाजन हुने संकेत प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । केही समयदेखि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट देखिएका उपाध्यक्ष रेणु यादव र नेता मोहम्मद इस्तियाक राइनसहितका नेताहरु पार्टी विभाजन गरी संघीय सरकारमा समावेश हुने संकेत दिएको छ ।
पार्टी संघीय सरकारमा गएका बेला आफूलाई मन्त्री नबनाएको र पार्टीको प्रदेश २ को नेतृत्वमा पारित गराएको जस्ता कुराले उपाध्यक्ष रेणु यादव अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । यसैको आक्रोशमा रेणु यादवले एक महिनाअघि पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर पार्टी फुटाउनेसम्मको चेतावनी दिएको अवस्था हो तर पार्टीका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरुको आग्रहमा रेणुले राजीनामा फिर्ता लिएर तत्कालका लागि पार्टी विभाजनको निर्णयबाट पछि हटेका थिए । हुनत पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीका नेता इस्तियाक राइन पनि असन्तुष्ट छन् ।
यस्तै पार्टी एकलौटी चलाएको र उचित अवसर नदिएको भन्दै सप्तरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. सूर्यनारायण यादवले समेत सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पार्टीका नेतृत्व पंक्तिबाट केही आश्वासन पाएपछि राजीनामा फिर्ता लिए पनि त्यस यता उनी पार्टीको कार्यमा खासै क्रियाशील छैनन् । समाजवादी विभाजन भएमा प्रदेश २ सरकारबाट पनि उपेन्द्र यादवको समूह विस्थापित हुनेछ । त्यहाँको सरकार ढालेर नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
त्यस्तै राजपा पनि विभाजित हुन्छ । पार्टीका नेतृत्व प्रष्ट रुपमा चिरामा विभाजन देखिएपछि प्रदेश २ को सरकार पनि खतरामा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । समाजवादी पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिएसँगै मधेश केन्द्रित दलको रुपमा परिचित समाजवादी र राजपाको दुरी बढ्दै गएको छ । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिए लगत्तै राजपाले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपासँग सहकार्य गरेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सहभागी भएपछि ती दुई दलबीचको दुरी झनै बढेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यही भएर समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजपालाई फुट गराउने योजनामा लागेको राजपाका एक नेताले बताएका छन् ।
ती नेताका अनुसार राजपाका अध्यक्ष मण्डल सदस्य महेन्द्र राय यादव र अनिल झा लगायतका नेतालाई पार्टी फुटाउन लगाइएको छ । तर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका कारण पार्टी र संसदीय दलभित्र ४० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा आउन नसक्ने देखिएकाले ती नेताहरुले पार्टी फुटाउन आँट नगरेको राजपाका ती नेताको भनाइ छ । अहिले सरकारले अध्यादेश मार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन खुकुलो बनाएपछि राजपा फुट्ने करिब करिब निश्चित भएको ती नेताको दाबी छ । तर, राजपाका अध्यक्ष मण्डलका अन्य नेताहरुले पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने दाबी गरिरहेका छन् ।
कुनै दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनुपर्ने कानुन थियो । तर, सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गरेपछि अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न र नयाँ दल दर्ता गर्न मिल्ने भएको छ ।
उदयपुरमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि
शेयर बजार पाँच अंकले बढेसँगै १२५४.५६ अंकमा आईपुगेको छ। दिनभरीमा १७० कम्पनीका शेयर...
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा मन्त्री महासेठ नै...
बैठकमा सहभागी भएर मन्त्रालय फर्केपछि मन्त्री महासेठ निराश देखिन्थे । मन्त्रालयका...
सोमबार पश्चिमी भू–भाग हुँदै प्रवेश गरेको उक्त प्रणाली आज उत्तरपूर्वी भू–भाग हुँदै...